Manodidina an’i Kambodza miaraka amin’ny Olom-pirenena nomerika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Oktobra 2018 15:59 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Janoary 2006)
Tao Krong Keb, tora-pasika efa hadino ao Kambodza, araka ny voasoratra ao amin'ny boky torolàlana, ZJ , vahiny mpiasan'ny fampandrosoana iray no tratran'ny tsy fisian'ny famatsiana herinaratra raha nijanona tao amin'ny trano fandraisam-bahiny izay. “Tsy te hankany Krong Kep … intsony aho. Ny fotoana voalohany nandehanako tany dia hita fa tena ratsy tokoa. Nisy trano fandraisam-bahiny vitsivitsy, ary indrisy fa tsy nisy herinaratra ny toerana nijanonanay ary feno hala fisaka ny fandriana ka rehefa niverina tany Phnom Penh aho dia nahatsikaritra zava-mibontsina tamin'ny hoditra vokatry ny tsy fahazakana, “hoy izy niaiky.h
Tafaverina tany Phnom Penh, renivohitry ny firenena, nitaraina momba ny herinaratra tsy azo itokisana ilay mpila ravinahitra iray Steve Goodman izay nanangana bilaogin-tsary hafa indray amin'izao fotoana izao ka tsy maintsy mikarakara sakafo amin'ny etona fandrehitra. Any an-toeran-kafa ao an-tanàna, tapaka ny herinaratra raha nibilaogy harivariva ny bilaogera iray tao Kambodza. “Raha nanoratra aho, tamin'ny 6 sasany hariva teo, dia tapaka tampoka ny herinaratra. Zavamisy vitsivitsy tahaka izany tato anatin'ny herinandro,” hoy izy nanoratra. Nahatezitra Anglisy iray ihany koa ny fahatapahan'ny herinaratra ka nanitatra mihitsy izy fa “na labozia aza tsy ananako intsony any an-trano!”
Taorian'ny ady efa ho 20 taona, nanjary lasa toerana fizahan-tany lehibe indrindra i Kambodza. ‘Ireo zava-mahatalanjona ao Kambodza – Ireo zavatra 7 lehibe indrindra hitanao sy atao any Kambodza’, lahatsoratra bilaogin'ny Khmer440, nanoritsoritra ny toerana 7 tsara tsidihana indrindra ao amin'ny firenena, manomboka ao amin'ny Angkor Wat ka hatrany amin'ny Mozean'ny Fandripahana Toul Sleng, mankany amin'ny torapasika mahafinaritra Sihanoukville, ny faritany Preah Vihear, ny tanànan'i Battambang, ary ny faritanin'i Rattankiri. Ny fananana gazety an-tserasera mba hizarana ny dia miaraka amin'ny namana sy ny fianakaviana dia midika zava-dehibe ho an'ny mpandehandeha sy izao tontolo izao. Hatramin'ny taona 2003, nanoratra momba ny diany tany an-tanàna, toeram-pialan-tsasatra, faritra ambanivohitra i Stefan. Tsy ireo mpila ravinahitra ihany, fa nanangana tranonkala iray antsoina hoe ‘Youth Vision (Vinan'ny tanora)’ ny vondrona tanora ary nizara ny zava-niainan'izy ireo mahavariana tamin'ny fisotroana divay izay vokarin'ny foko vitsy an'isa hatry ny ela ao amin'ny faritanin'i Modol Kiri, faritra ambanivohitry ny firenena.
Manome aretin'andoha anao ve ny fitsidihana rehetra any Kambodza?
Ho an'ny olom-pirenena Taiwaney iray nikasa hitsidika an'i Kambodza, nanome fahatsapana voalohany ho azy momba ny fikarakarana taratasy visa ao amin'ny firenena ny taratasy sy fizotry ny fahazoana visa fizahantany ho any amin'ny firenena. Tao amin'ny masoivoho Kambodziana any Singapaoro, firenena misy azy, mangataka 5 dolara fanampiny ny manampahefana misahana ny visa hahazoana tolotra “express”. Ho setrin'izany, nanoratra ny Gazetin'ireo Bilaogeran'i Singapaoro, Tomorrow, popagandhi fa “raha ny marina, ny 5 dolara Amerikana fanampiny dia fitsipika kokoa fa tsy zava-miavaka” raha tsy hoe miantsona ao amin'ny seranam-piaramanidin'i phnom penh na siem reap amin'ny zotra iraisam-pirenena ianao, na any amin'ny sisintany ihany koa rehefa ho any amin'ny firenena tahaka izany, dia tsy maintsy miomana fotsiny ianao hanaiky izay rehetra atolotra anao. “
Na dia niatrika ilay manamboninahitra aza izy, dia manantena ny hitsidika an'i Kambodza amin'ny fomba tsara.
Fitetezana an'i Azia
Ao anatin'ny Sambo ho an'ny Fandaharan'asa ho an'ny Tanora Aziatika Atsimo-Atsinanana 2005 (SSEAYP), mampahafantatra amim-pireharehana ny tanora Kambodziana, miaraka amin'ny tanora hafa avy amin'ny firenena ASEAN fa hitsidika firenena 6 i Somongkol Teng, mpampianatra ao Kambodza. Ity fandaharan'asa ho an'ny tanora tohanan'ny Japoney ity, miaraka amin'ireo firenena 11 avy ao amin'ny ASEAN sy Japana mandray anjara, dia hizotra mankany Malezia, Thailandy, Vietnam, Brunei, Filipina ary Japana amin'ny alalan'ny sambo. Ao amin'ny bilaoginy, mitantara ny dian'ny vondrona ny diarin-tsary.
22 Jona 2021Azia Atsinanana
09 Jona 2021Azia Atsinanana